Saamaynta Canigou | Saadaasha Shabakadda
Mararka qaar waxyaabo ayaa dhaca oo soo jiita gaar ahaan dareenka, sidii ku dhacday JP Petit. Markii uu qorrax dhaca ka daawanayay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska, ayuu waxoogaa arkay buuro dhaadheer oo qorraxda horteeda taagan. Tani, oo caadi ahaan noqon karta, runti sidaas maahan, maxaa yeelay buurahaas waxay u muuqdeen inay ka soo baxayaan Badda Dhexe. Aad ayey ula yaabtay isaga oo wuxuu go'aansaday inuu sawir ka qaado si uu u diiwaangaliyo muuqaalka dhifka ah.
Petit isaga oo aan ogeyn ayaa markhaati ka ahaa Saamaynta Canigou. Laakiin maxay dhab ahaan tahay ifafaaladani? Maxaa dhacaya?
Badmaaxyadu mar bay rumaysteen inay yihiin buuro cirfiid; Si kastaba ha noqotee, ma jiraan buuro ku yaal badda Mediterranean, laakiin haa 165 mayl (265,542km) fog, ee Pyrenees. Waxaa jira Canigou Massif, oo sawirkiisa uu arkay Petit. Khabiirka indha-indheynta indhaha ee Les Cowley ayaa sharraxay »» ma jiro qadka tooska ah ee aragtida Massif sababo la xiriira qallooca dhulka. Aragtida ayaa kaliya macquul ah maxaa yeelay iftiinka waa la qaboojiyey meeraha ku wareegsan. Asal ahaan jawigu wuu ka cufan yahay heerarka hoose wuxuuna u shaqeeyaa muraayad si uu u laabo falaaraha qorraxda hareeraheeda. Wuxuuna sii waday inuu dhaho muraayadaha ayaa sameeya wax lamid ah, laakiin in kiiskan aysan ahayn kuwo loo baahdo, kaliya "hawo nadiif ah oo joogto ah iyo bad dheer."
»U fiirsashadani maaha mid nasiib darro ah. Alain Origne wuxuu naftiisa u huray barashada dhacdadan iyo saadaalin karaa goorta ay mar kale dhici doonto. Wuxuu jeclaan lahaa inuu maqlo waxyaabaha kale ee lagu arko masaafo dheer, ”Cowley ayaa intaas ku daray. Sidaas darteed haddii aad fursad u leedahay inaad aragto, sawirro qaado oo la xiriir isaga dhexdiisa bogga internetka, taas oo uu ku soo rogo sawirro iyo animations-ka saamaynta cajiibka leh ee Canigou.
Alain Origne's saameynta Canigou.
Miyaad maqashay dhacdadan cajiibka ah? Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Saamaynta Canigou
maxaa yeelay waxa lagu sheegay maqaalka, waxay kuxirantahay saameyntan, waqtiga ay qorraxdu u dhacdo cirifka waa inay waxbadan isbadashaa, waa badan tahay saameyntan ayaa runtii go'aamin laheyd waqtiga qorrax dhaca, wax aan dhab ahaan u dhicin cabirka muhiim ah.
Jasiiradaha Balearic, oo ka tirsan Shirka Cimilada (COP22)